Iyo Concrete Vibrator shaft inozivikanwa muEuropean
Anodiwa Mutengi, isu tiri vagadziri vemugwagwa wekugadzira muchina. Uye ikozvino nguva isu tinokwanisa kuona yakawanda uye yakawanda yemunhu mushandisi yekongiri vibrator. Saka isu tinongoda kuve nepfupi sumo yerudzi urwu rwemuchina. Iyo kongiri vibrator shaft ine zvinotevera maficha: 1) Inotora iyo o ...
Nyowani Nyowani yeMafashoni Mvura Pombi muAustralia
Pombi yemvura inopa kwakatanhamara kuita kweyakajairika mapombi ekushandisa emvura. Kunyangwe iri yekuchenesa-basa rekuchenesa, kudiridza gadheni kana kupomba kunze kwenzvimbo yakazara mvura. Izvi zvigadzirwa zvine iro rekuwedzera kurodha tangi. Yakawedzera-hombe 2L peturu tangi zvinoreva kuti inogona kumhanya kweanosvika maawa maviri pane imwechete ...
Iyo Nyowani modhi ine perkins injini inozivikanwa muUK
Kambani yedu yaigara ichitarisa kufambira mberi nekuvandudza neyedu muchina ruzivo. Iye zvino isu tinongoda kuvandudza yedu yemuchina moyo iyo yeinjini sutu yenzvimbo yakawanda. Iyo Perkins injini yekuEngland, sekuziva kwedu tese iyo yanmar injini inokonzeresa izwi shoma uyezve kuita diki simba ...
Kongiri yakaona Mugwagwa wakaona muDust Control yeEngland
Kuti ikodzere nharaunda dzakasiyana dzeEngland, kambani yedu ingowana imwe nyowani dhizaini muchina kuti ienderane nezvaunoda. Dhayamondi akaona mashizha ekongiri anowanzo kuvezwa laser, iwo anowanzo gadzirirwa kunyorova nekuti kongiri yekucheka inowanzo kuve yakaoma kana kuti ine hasha. Kana iwo mashizha ...
Mini excavator mukusimudzira uye zvemahara zvishongedzo zvemutengi mutsva muFrance
Zvino nguva diki diki diki rekuchera rinonyanya kufarirwa mune zvekurima uye wega gadheni. Tinogona kuona heino mamiriro ezverutsigiro. 1.Good inofamba maoko. Ruoko rwekuzungunuka runotsamira pane imwe hydraulic pombi, kuti ese maCXA, CXB akateedzana ane ichi chinamatira. Nezvikamu izvi, iyo Arm ca ...
Plate compactor iyo inozivikanwa muRomania inogutsa ese EU muyero
Mukuvaka, pane matatu makuru mhando dze compactor: ndiro, iyo rammer, uye roller yemugwagwa. Uye Ace-michina yakanangana neiyo rammer uye ndiro, nhasi isu tinongoda kuita ipfupi sumo nezve iyo plate compactor. MuEngland zita "wacker ndiro" kana chete "wacker ...
Remote simba trowel pamwe nebhenefiti.
Nekuvandudzwa kwehunyanzvi, ikozvino muchina une smart modhi uye dzimwe nguva inogona kupa mashandisiro ari nani pane echinyakare. Iye zvino kambani yedu iri kungogadzira imwe nyowani muchina wekugadzira nzira. Iyo imwe yemhando yemagetsi trowel. Inotaridzika yakati siyanei neyedu yemuchina wh ...
Simba Trowel zvigadzirwa zvinozivikanwa mumugwagwa wekugadzira muchina.
Maturu edu anokwenenzvera renzvimbo yedu yazvino nenzira huru, kubatanidza maitiro ese kubva pasi pekumanikidza kuenda kukoriri yepasi yekongiri, uye inokodzera mushe nzira yedu yekukudziridza yedu Concrete Surfaces nePasi bhizinesi. Nekuwedzera kwekukwira-pamatanho isu tichava necomp ...
Pombi yemvura injini inosarudza uye zvigadzirwa zvinoratidza
Pombi mudziyo unofambisa zvinwiwa (zvinwiwa kana magasi), kana dzimwe nguva slurries, nemaitiro emuchina, anowanzo shandurwa kubva pasimba remagetsi kuita Hydraulic simba. Pombi dzinogona kuiswa mumapoka makuru matatu zvinoenderana nenzira yavanoshandisa kufambisa inoyerera: yakananga kusimudza, kufambisa, ...
Iyo Nhoroondo uye Rudzi rweKongiri Musanganiswa
Musanganisi wekongiri (unowanzoitwa colloquially unonzi simendi musanganisi) chishandiso chinobatanidza zvakafanana simende, huwandu hwakaita sejecha kana mavhu, uye mvura kugadzira kongiri. Chaiye musanganiswa wekongiri anoshandisa dhiramu rinotenderera kusanganisa zvinhu. Imwe yevatangi vekongiri vekutanga yakambogadzirwa muna 19 ...
Zvakabatanidzwa zveMini Excavator yekuita iri Nani Jobho
Mini vacheri vanofarirwa nenzvimbo dzebasa dzine dzimba dzakasimba, vanokwanisa kuenda uko michina mikuru isingakwanise. Mini vacheri vakanakira basa mumashure, mukati mezvivakwa uye kwakakomberedza mafenzi ekuchera, kusimudza uye kuchenesa. Ini NDINODA MABHUKU akajairwa ekuchera nepasi nekuda kwezvakawanda zvinangwa, ...
Kongiri Musanganiswa Anofanirwa Kugutsa izvo zvinodiwa kune Vagumi-vashandisi
Kwemakore 2020 apfuura musanganisi wekongiri zvakare iri yepamusoro yekutengesa zvigadzirwa mukambani medu, uye isu tinogona kupa saizi yakakura kubva paMini (80L) kune rori (4.3 CBM). Uye vese vatengi vedu vanongoda kuita basa riri nani. Kuti semutengesi, zvigadzirwa zvinoenderana nezvinhu zvakasvibirira uye nehunyanzvi hwakanaka. Saka mu ...
Chiratidzo: Kuve mupepeti wepasi rose wezvigadzirwa zvekuvaka zvevashandi vezvemhizha